WOWOW Commerce Kicheni Pot Filler Chrome
musha / Kicheni Faucets / Pot Yekuzadza Faucets / WOWOW Yekutengesa Kicheni Pot Yekuzadza Pasta Arm Chrome
WOWOW Yekutengesa Kicheni Pot Yekuzadza Pasta Arm Chrome
Iyo pot filler kukwirira pamusoro pechitofu inorumbidzwa zvikuru nevatengi vanobva kuTaiwan, Japan, Germany, uye America.
Yakagadziriswa nemacion einion uye lathes, inoratidza chimiro chakaringana.
Ichi chigadzirwa chakasimbiswa pasi ISO.
Nekuchinjika, ichi kicheni faucet inogona kusvika nyore nyore nzvimbo uko kune zvakaoma kusvika.
2311100C yekuraira mirairo
Pot filler faucet yekicheni yako chitofu 2311100C
Iyo pombi yekusefa pombi inyaya inoshanda yekubvisa kicheni kako pane refu, yakabatana ruoko. Kazhinji gomba rekuputira muhari rinoiswa pamusoro pechitofu mukicheni yako. Nenzira iyi iwe unokwanisa kuzadza mapoto nemvura, nepo ivo vakaiswa pachitofu nechekare. Saizvozvi haufanirwe kutakura zvinorema kuzadza mapoto kubva kukicheni yako kunyura kune yako kicheni chitofu. Chinyakare muhari yekuchera faucets haifanire kuvhiringidzwa nemamwe makicheni sofa faipits ane ruoko rwakabatana. Musiyano mukuru pakati pepuru firiji faucet uye rakabatanidzwa mukicheni sofa faucet ndiko kudziya kwemvura kupi. Iine pombi filler faucet chete imwe chete inotonhora yemvura inodiwa. Asi zvechokwadi unogona kusanganisa poto yekuita faucet neina yakabatana yekicheni sofa faucet kuti usvike pakupedzisira kuwirirana mune yako kicheni dhizaini.
Paunogadzira kicheni yako, pakutanga iwe unowanzo funga maitiro ako ekicheni yekurota anofanirwa kutaridzika sei. Asi pamwe zvinonyanya kukosha ndiko kushanda kwekicheni yako itsva yekurota. Iwe unofanirwa kufunga nezvekubika kwako, rudzii rwemidziyo yaunoda, kwaunoda masosi emwenje, uye kuti ungachengeta sei kicheni yako nyore. Chero chinhu chimwe chete chemidziyo mukicheni mako chinopa sarudzo dzakasiyana siyana. Izvi zvinoverengeka yeyako faikits kicheni zvakare. Asi chinhu chinowanzokanganikwa, ndeyekupedzisira kushanda kwehombodo yekufetisa faucet. Chete nekuti hazvizivikanwe zvakanyanya. Kune rimwe divi rudzi urwu rweefuti yekicheni inogona kuita kuti hupenyu hwako huve nyore kwazvo kana uchibika.
Sei uchida pani faira yekuzadza?
Iyo yakakura pro ye pot filler faucet ndeyekuti inokuchengetedza iwe inotakura poto inorema izere nemvura kubva kukicheni sofa kune yako kicheni kitofu. Izvi zvinogona kunyanya kuva mukana mukuru kwauri iwe paunenge usingakwanisi kana kusingade kutakura zvinhu zvinorema. Kutakura mapoto anorema kunogona kukonzera kunetseka pamaoko ako, maoko nemusana. Izvi zvinogona kukukanganisa kana uchinge uchinge uchinge uchirwadziwa nemusana kana mumaoko. Kunze kwezvo, zvinogona kuitika kuti hari huru hari kupinda mukicheni yako kunyura. Nechikonzero ichi zvinogona kuve zvakaoma kuzadza hari hombe nemvura.
Unogona kusarudza kubva kuzvinhu zviviri zvekutanga kana zvasvika pombi yekuzadza mapombi. Iko kune imwechete-yakasanganiswa uye yakapetwa-maviri akabatanidzwa muhari yekuzadza mapombi. Zvinoenderana nehukuru hwechitofu chako chekicheni icho chinoshandira zvakanakira iwe. Kana iwe uine chitofu chekicheni chine akawanda anopisa, hari yekuzadza pombi ine mapaviri majoini inoshanda yakanakira iyo nekuda kwekusvika kwayo. Iyo WOWOW Yemazuvano Imba yePurazi Pot Filler Faucet Yakakwenenzverwa Chrome inokupa iwe yakapetwa ruviri ruoko ine yakazara inosvika ye20 inches. Neiri refu pombi yekuzadza pombi iwe unogona kusvika chero chikamu chekicheni chako chitofu uye nekudaro inopa kwakanyanya kunyaradzwa.
Inoshanda poto filler faucet maitiro
Iyo yekuzadza pombi pombi yeWOWOW inobatsira chaizvo neruoko rwakabatana, sezvo iwe uchikwanisa kupeta ruoko zvachose uchidzoka kumadziro echitofu. Nenzira iyi haizotora chero nzvimbo mukicheni yako uye haizotaridzika kunge isina kunaka. Nekuda kweyakagadzika dhizaini iwe unogona kuchengetedza yakakosha kicheni nzvimbo. Iyi yepamusoro pombi yekuzadza pombi inogona kuiswa kure kuremekedza dhizaini dhizaini yako yekushongedza kicheni. Iwe hautombo cherekedza iyi pombi yekuzadza pombi pamadziro ako!
Vanhu vazhinji vanotya kuti pombi yekuzadza pombi inodonha uye inokonzeresa kukuvadzwa kwemvura mukicheni yako. Kusiyana nemapombi ekugezera emukicheni, kudonha mvura kunogona kubatwa nesingi rekicheni. Nepombi yekuzadza pombi mvura inogona kudonha pachitofu chako chekicheni kana pakaunda kicheni. Uye pakupedzisira pane yako yekicheni pasi iyo inogona kukonzeresa zvakanyanya kukuvara. Nezvikonzero zvekuchengetedza, pombi yekuzadza mapombi inowanzo kuve neane levers maviri. Nenzira iyi pombi yekuzadza pombi inodzivirirwa kaviri kubva pakudonha. Ruoko rwakatambanudzwa rweWOWOW muhari yekuzadza pombi ine mavhavha maviri eiri maviri kuyerera kwekudzora. Paunenge wapedza nekubika, unongodzima vharafu huru futi, saka hapana mvura inogona kudirwa. Nenzira iyi kuchengetedzwa kwako kwekicheni kunovimbiswa.
Yakakwirira mhando muhari dhiza faucet
Iyo yeWOWOW Modern Farmhouse Pot Filler Faucet Yakasvibiswa Chrome yakagadzirwa nehunyanzvi hwechizvino-zvino. Nenzira iyi WOWOW inova nechokwadi chakaringana penguru iyi pot filler faucet yekuita kwakakwana. Iyi WOWOW pot filler faucet inopa refu hupenyu hwekuvimbiswa nekuda kwemhando yayo yepamusoro yakasvibiswa yemukati. Iyo yakagadzirwa yakachena yakakwirira-density yendarira (yendarira). Unovimbiswa mvura yakachena yekumwa inobuda mu faucet iyi pasina chero zvinhu zvine njodzi. Hutano hwako huri pamusoro pezvose zvakakosha! Kwete pasina ichi chigadzirwa cheWOWOW chave chiri ISO-chakasimbiswa.
Yakanaka mvura inowanikwa neiyi pot filler faucet
Nemhando yepamusoro ye360-degree spout, unogona kusvika chero chero nzvimbo uye unozadza chero chinhu nyore. Mavharuvhu akagadzirwa nemhando yepamusoro uye akasununguka kubata. Iwe unoona mhando yacho pakarepo kana iwe uchinge uchishandisa mavharuvhu. Iyo nzira yekuyerera kune rumwe rutivi yakakodzera kuzadza mvura. Iyo inopa kumanikidza kwakasimba kuti ipe rwizi rwemvura rusingaperi. Iwo mavheji akakwirira-anodzvinyirira anodzivirira kupaza uye kudonha kuti akupe nyaradzo yepamusoro. Uye ndizvo chaizvo zvauri kuda kubva ako kicheni faucets!
Iyo pot filler faucet yeWOWOW yapera nebrush uye yakarumurwa nickel. Iyo ine yakasarudzika yakasvibiswa chrome kupedzisa iyo inokodzera mune chero kugadzirwa kicheni. WOWOW's pot filler faucet haina kukwenya-inodzivirira uye nyore kugeza. Kuchengeta yako pombi filler faucet saka zviri nyore zvakare. Iwe unogona kuchengeta yako pombi filler faucet sechitsva kwenguva yakareba kwenguva. WOWOW inopa makore mashanu waranti pane yayo yese faucets. Nechikonzero ichi iwe unoziva kuti iwe wakawana muhari filter faucet iyo inokupa yakanyanya mutengo-mhando chiyero. Tine mari yedu yemazuva makumi mapfumbamwe yekudzoserwa mari, unogona kudzosera poto yako yekufa pombi pasina dambudziko kana usingade. Asi tinoziva kuti izvi hazvizoitika. Isu tinovimba nechigadzirwa chedu!
Zvakanakira poto filler faucet muchidimbu:
· Zadza hari mapoto ako pachitofu chako
· Inoshanda rakabatana ruoko kuisa nyore poto filler faucet kure
· Unogona kusvika munzvimbo dzisingasvikiki pamasendimita makumi maviri
· Yakasarudzika yakasvibiswa chrome dhizaini
· Yakagadzirwa zvemhando yepamusoro mhangura zvemidziyo
SKU: 2311100C Categories: Kicheni Faucets, Pot Yekuzadza Faucets Tags: Polished, Pot Yekuzadza, Wall Walled
poto yekuzadza pombi chrome
Pot Yekuzadza Faucet Kupeta Kaviri Bata Chrome
Yekutengesa / Yekudyira / Yekugara / Yekunze
Pot yekuzadza pombi / NPT chinongedzo; Neoperl ABS aeractor; Kuisa Zvishongedzo (ChiGerman Fischer nylon anchor bhaudhi)